Kishki oo La Caddeeyey Halka uu ka Soo Dheegto(Copy) hadaladda Been Abuurka ku ah Diinta Islaamka – WARSOOR
Kishki oo La Caddeeyey Halka uu ka Soo Dheegto(Copy) hadaladda Been Abuurka ku ah Diinta Islaamka
Islaamka – (warsoor) – Waxaa muddooyinkan u dambeeyey soo xoogaysanaayey khilaafka ka dhex taagan Sheekh Maxamud Shibil iyo ninka sheegtay sheekh oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Kishki. Ninkan oo la yimid inuu ceebeeyo guurkii nabiga ee Caasha, quraanka oo uu si dadban u sheegay inuu yahay makhluuq, xukunka dilka ee sinadda iyo ridda oo uu gabi ahaanba dafiray iyo arimo kale.
Haddaba Sheekh Shibil ayaa dhawr bilood ka hor sheegay inuu Kishki casharadiisu yihiin Copy iyo Pasta. Haddaba waxaa arintaasi daaha ka fayday Sheekh Xuseen oo leh oo barta Youtube-ka ee DAACI SHOW. Waxaanu si qoto-dheer u soo baadhay ninka uu hadaladda ka soo dheegto iyo sida aanu waxba uga badali ee u uu soo turjumay hadaladiisa.
Ninkaasi oo lagu magacaabo Cadnaan Ibraahim, waxaanay Shiicadu sheegeen in ninkaa iyo nimanka la fikir ahi ay wax fiican u sameeyeen Shiicadda.
Haddaba walaal halkan ka daawo xogtan:
Guddoomiye Cirro oo Kulan Aan Loo Kala Hadhin oo Qado Sharaf ah La Qaatay Cuqaasha iyo Odeyada Ka Soo Jeeda Beelaha Ciise Muuse Galbeed